Gaari Taw Ah Oo AMISOM Looga Gubay Deegaanka Leego. – Bogga Calamada.com
Gaari Taw Ah Oo AMISOM Looga Gubay Deegaanka Leego.
Wararka ka imaanaya deegaanka Leego ee gobalka Shabeelada hoose waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta AMISOM qarax culus lagula beegsaday wadada isku xirta deegaanka Leego iyo garoonka diyaaradaha Bilidoogle oo ka wada tirsan gobalka Shabeelada hoose.
Qaraxa oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasa waxey la kacday gaari Taw ah’iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobalka Shabeelada hoose.
Goob-joogayaal ka agdhawaa goobta qaraxa ayaa sheegay in gabi ahaan uu burburay gaariga Taw-ga ah ee miinada ay haleeshay’waxaana sidoo kale qaraxa baqti iyo dhaawac ku noqday tiro askar ah oo ka tirsan Kufaarta AMISOM.
Qaraxan ayaa sidoo kale kusoo aadaya xilli aroornimadii hore ee saaka qarax lagu gubay gaari Cabdi Bile ah maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada federaalka lagula beegsaday duleedka garoonka diyaaradaha Bilidoogle ee gobalka Shabeelada hoose.